La soco GNU / Linux waqtiga dhabta ah Netdata. | Laga soo bilaabo Linux
b4cks41l | | Aplicaciones, GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Hawsha Internetka maalin maalmaha ka mid ah ayaan helay barnaamij si jaantus ah loola socdo howlaha, shabakadda, xusuusta iyo waxyaabaha kale ee xiisaha leh ee PC-ga.Haddii waxaan u maleynayay inay aad u wanaagsan tahay, sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan idinla wadaago dhammaantiin waxayna ku saabsan tahay Netdata.
1 Waa maxay NetData?
2 Sidee loo rakibaa NetData?
3 Sidee loo isticmaalaa Netdata?
Waa maxay NetData?
netdata waa aalad ah il furan, taasi waxay noo ogolaaneysaa: kormeerka waqtiga dhabta ah ee waxqabadka kumbuyuutarka. Waxay bixisaa aragtiyo aan lala tartami karin, waqtiga-dhabta ah oo ku saabsan wax kasta oo ku dhaca nidaamka aad maamusho (oo ay ku jiraan codsiyada sida websaydhka ama keydka macluumaadka), iyadoo la adeegsanayo xayeysiisyo casri ah oo is-dhexgal leh.
netdata Waa dhakhso oo hufan, oo loogu talagalay inay si joogto ah uga shaqeyso dhammaan nidaamyada, iyada oo aan la carqaladeyn shaqadooda.
Sidee loo rakibaa NetData?
Marka xigta waxaan siin doonnaa talaabooyinka lagu rakibo NetData ee Debian, laakiin sidoo kale waxaa lagu sameyn karaa Arch, Gentoo, CentOS, Fedora iyo Suse.
Xusuusnow inaad ku maamusho amarrada rukhsadda rukhsadda.
# apt-get rakib zlib1g-dev uuid-dev libmnl-dev gcc samee git autoconf # apt-get rakib autoconf-archive autogen automake pkg-config curl
Hadda waxaan ku soo qaadaneynaa barnaamijka kaydkiisa Github.
#git clone https://github.com/firehol/netdata.git --depth = 1
Waxaan u guureynaa galkaaga
Waxaan bilaabaynaa rakibayaasha
#. / netdata-installer.sh Ama waad ku samayn kartaa. #sh netdata-installer.sh
Haddii qalad uusan halkan ka muuqan, hawsha oo dhami way fiicantahay, hadda waxaan ka dhigi doonnaa Netdata inuu ku soo bilowdo daemon, si loogu maareeyo systemctl.
# disho nidaamka netdata
# koobiyee netdata.service nidaamka
nidaamka #cp / netdata.service / iwm / systemd / system /
# Jinka dib u rar
# Sahlo Netdata
#systemctl awood netdata
# Bilow netdata
# adeeg netdata bilaw
Sidee loo isticmaalaa Netdata?
Marka aan rakibno Netdata, hadda waxaan la shaqeyn doonnaa. Waxaan furaynaa daaqad biraawsar oo tan ayaan dhigeynaa http://localhost:19999
Waxayna horey uheli doonaan Netdata oo kormeeraya waxkasta oo nidaamku sameeyo.
Hagaag intaas uun bay noqotay waxaan rajeynayaa inaad ka heshay oo aan si dhakhso leh kuu arki doono. Waan yara tarjumay oo waxaan soosaaray rakibida.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » La soco GNU / Linux waqtiga dhabta ah Netdata.
Ma ogtahay https://nmap.org/? ama tallaalkaagu aanu aadin halkaas.?
Ku jawaab Eulalio
Xaqiiqdii waan ogahay, laakiin maxay tahay ujeedka Nmap halkan?
Ku jawaab bl4cks41l
Qalab aad u fiican. Waad ku mahadsantahay soo galinta
Waan ogaa Zabbix. Waxaan u maleynayaa inay tani la mid noqon doonto.
haduu serverku fogyahay isla sidii buu u shaqeeyaa?
Hi Miguel, si daacad ah waligay iskama dayin laakiin waad samayn kartaa tijaabada, waxay u shaqaysaa OS kasta.
Sac lo'da !! Waa wax fiican, aad u dhameystiran oo leh qaab muuqaal ah oo aad u qabow
Waxaa laga yaabaa in dalab la mid ah Solaris 10?
Waxay ila tahay in Solaris ay fuliso barnaamij kasta oo nuuca .RPM ah oh waxaan u malaynayaa in waxkasta oo ka yimaada GNU / Linux, waxba kama aqaano Solaris, laakiin waxaad isku dayi kartaa inaad ku rakibto sidii ay ahayd CentOS.
Salaan aad ufiican
Xiiso leh, laakiin sidee loo sii daayaa? Waxaan ahay bilow.
Hello Jean, waan ka xumahay dib u dhaca laakiin waqti dheer ayaan jaray, waxaan ku xirayaa isku xirka rakibaadda iyo sida loo tirtiro waa caadi https://github.com/firehol/netdata/wiki/Installation.
Waad salaaman tahay, ma ii sheegi kartaa haddii netdata ay kormeeri karto kumbuyuutarrada iyo serverka windowsws 10 iyo 2012 r2
Shabakad aasaasi ah dijo
Wax ku biir weyn!
Jawaab Shabakada Aasaasiga ah